မီတာခသက္သာေအာင္္ က်န္းမာေရးလည္း မထိခိုက္ေအာင္္ အဲဲယားကြန္းဖြင့္နည္း - Latest Myanmar News
မီတာခေတြေစ်းတက္ၿပီဆိုိေတာ့ မီတာခ သက္သာေအာင္ အဲယားကြန္းဖြင့္နည္း
လူအမ်ားနားလည္ေအာင္ Technical Terms ေတြကို ေရွာင္ၿပီး အလြယ္ပဲ ေျပာလိုက္ပါေတာ့မယ္။
ဒီေခတ္မွာ အသုံးအမ်ားဆုံး ျဖစ္တဲ့ Split Type Air Conditioner ေတြမွာ Indoor Unit နဲ႔ Outdoor Unit ရယ္ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ပါတယ္။
အဲကြန္းရဲ့ Indoor Unit ဟာ အခန္းတြြင္းက ေလကို စုပ္ယူလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီေလထဲမွာ ပါလာတဲ့ ေရေငြ႕ေတြကို Evaporator လို့ေခၚတဲ့ ကိရိယာနဲ႔ ဖယ္ရွားၿပီး
အဲကြန္းက ေရေတြ တေတာက္ေတာက္ က်တာဟာ အဲဒီလို ဖယ္ရွားခံရတဲ့ အခန္းတြင္း ေလထုထဲက ေရေငြ႕ေတြပါပဲ) ေျခာက္ေသြ႕သြားတဲ့ ေလကို
Compressor နဲ႔ Condenser ေတြကို ျဖတ္သန္ေစၿပီး ေအးျမေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေလကို ျပန္မွုတ္သြင္းလိုက္ပါတယ္။
ဥပမာ အျပင္မွာ ၃၅ ဒီဂရီ ရွိေနခ်ိန္ အခန္းတြင္းမွာ အဲကြန္းကို ၂၅ ဒီဂရီ ဆက္တင္လုပ္ထားမယ္ ဆိုရင္ ၂၅ ဒီဂရီကို မေရာက္မခ်င္း အဲကြန္းဟာ အခန္းတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေလထုကို စုပ္ယူလိုက္၊ ေလထဲက ေရေငြ႕နဲ႔
အပူကိုိ ဖယ္ရွားၿပီး ေအးျမတဲ့ ေလကိုိ အခန္းတြင္းကို ျပန္မွုတ္သြင္းလိုက္နဲ႔ အခန္းတြင္းက အပူခ်ိန္ကို တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာေစၿပီး ေအးျမလာေစပါတယ္။
Evaporator က ေလထုထဲက ေရေငြ႕ကို ဖယ္ရွားၿပီး အခန္းထဲကဘအပူေတြကို ဖယ္ေပးတာပါ.
အခန္းတြင္း ေရေငြ႕ပါဝင္ႏွုန္းကို ေလၽွာ့ခ်ေပးတဲ့အတြက္္ အခန္းတြင္းမွာ မွိုိမတက္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမႊားေတြ မေပါက္ပြါးနိုင္ျခင္း
ေရေငြ႕နည္းၿပီး ေျခာက္ေသြ႕သြားတဲ့ေလဟာ လူ႔အေရျပားက ေခၽြးေတြကိုိ အလြယ္တကူ အေငြ႕ျပန္ေစလို့ ေအးျမမွုကို Cool Mode နဲ႔ အေအးခံထားသည့္အလား ခံစားရေစျခင္း
မီတာခတွေစျေးတက်ပြီဆိိုတော့ မီတာခ သက်သာအောင် အဲယားကွန်းဖွင့်နည်း
အဲကွန်း Remote Control ကနေ အပူချိန်ကိုအနိိမ့်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ ၁၆ သို့မဟုတ် ၁၈ ဒီဂရီလောက်ထားလိုက်ရင် ၂၅ ဒီဂရီမှာ ထားတာထက် ပိုအေးတဲ့ လေတွေ ထွက်လာမယ်၊ အခန်းလည်းမြန်မြန် ပိုအေးမယ်လို့ လူအများစုက ထင်ကြပါတယ်။
အမှန်က လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲကွန်းက ထွက်လာတဲ့ လေဟာ ကိုယ်ထားထားတဲ့ အပူချိန်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ တစ်သမတ်တည်းပါ။ ဒါဟာအဲကွန်းတစ်ခု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ မသိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများနားလည်အောင် Technical Terms တွေကို ရှောင်ပြီး အလွယ်ပဲ ပြောလိုက်ပါတော့မယ်။
ဒီခေတ်မှာ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်တဲ့ Split Type Air Conditioner တွေမှာ Indoor Unit နဲ့ Outdoor Unit ရယ်နှစ်ပိုင်းပါ၀င်ပါတယ်။
အဓိက အနေနဲ့ Indoor Unit မှာ Evaporator နဲ့ Outdoor Unit မှာ Compressor နဲ့ Condenser တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Evaporator ဟာ လေထုထဲက ရေငွေ့တွေကိို ဖယ်ရှားဖိို့ ဖြစ်ပြီး Compressor နဲ့ Condenser တွေက လေထဲက အပူတွေကိို ဖယ်ရှားပြီး လေကိို အေးမြသွားအောင် လုပ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲကွန်းရဲ့ Indoor Unit ဟာ အခန်းတွွင်းက လေကို စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလေထဲမှာ ပါလာတဲ့ ရေငွေ့တွေကို Evaporator လို့ခေါ်တဲ့ ကိရိယာနဲ့ ဖယ်ရှားပြီး
အဲကွန်းက ရေတွေ တတောက်တောက် ကျတာဟာ အဲဒီလို ဖယ်ရှားခံရတဲ့ အခန်းတွင်း လေထုထဲက ရေငွေ့တွေပါပဲ) ခြောက်သွေ့သွားတဲ့ လေကို
Compressor နဲ့ Condenser တွေကို ဖြတ်သန်စေပြီး အေးမြခြောက်သွေ့တဲ့ လေကို ပြန်မှုတ်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
ဥပမာ အပြင်မှာ ၃၅ ဒီဂရီ ရှိနေချိန် အခန်းတွင်းမှာ အဲကွန်းကို ၂၅ ဒီဂရီ ဆက်တင်လုပ်ထားမယ် ဆိုရင် ၂၅ ဒီဂရီကို မရောက်မချင်း အဲကွန်းဟာ အခန်းတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လေထုကို စုပ်ယူလိုက်၊ လေထဲက ရေငွေ့နဲ့
အပူကိို ဖယ်ရှားပြီး အေးမြတဲ့ လေကိို အခန်းတွင်းကို ပြန်မှုတ်သွင်းလိုက်နဲ့ အခန်းတွင်းက အပူချိန်ကို တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာစေပြီး အေးမြလာစေပါတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ အခန်းတွင်း အပူချိန် ကျဆင်းလာတာဟာ သုံးစွဲသူ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန်ကို ရောက်ပြီ ဆိုတာကို အဲကွန်းရဲ့ အာရုံခံစနစ်က သိလိုက်တာနဲ့အဲကွွန်းကို ခဏလောက် ရပ်ထားလိုက်ပါတယ်။
စက်ရပ်တာ ကြာလာလို့ အခန်းတွင်း အပူချိန်က ၂၅ ဒီဂရီ ထက် ပြန်မြင့်တက်လာမှ အဲကွန်းက အလုပ် ပြန်လုပ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အပြင်က ၃၅ ဒီဂရီ အပူချိန်မျိုးကို ကိုယ့်အိမ်တွင်းမှာ မခံစားနိုင်လို့ အေးမြလာအောင် ၂၅ ဒီဂရီပဲ ထားသူနဲ့ ၁၆ ဒီဂရီ ထားသူ ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုချင်း လုံးဝ မတူတော့ပါဘူး။
အခန်းတွင်း အပူချိန်ကို ၁၆ ဒီဂရီ ၁၈ ဒီဂရီ အထိ ချဖို့ဟာ အဲကွန်းတစ်လုံးအတွက် ခက်ခဲပါတယ်။
အဆင်ပြေသည့်တိုင်အောင် ၁၆ ဒီဂရီ မရောက်မချင်း အဲကွန်းဟာ မနားတမ်း အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက် မီတာအရမ်းစားသလို စက်အပေါ်မှာလည်း ဝန်ပိစေပြီး သုံးစွဲနိုင်တဲ့ သက်တမ်း တိုတောင်းစေ (ပျက်လွယ်ခြင်းကို ဆိုလို) ပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ့်အခန်းတွင်းမှာ ၁၆ တိို့၁၈ ဒီဂရီတို့ ဖြစ်နေဖို့ တကယ်ရော လိုအပ်ရဲ့လားလို့ ပြန်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။
လူ့အရေပြားဟာ အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီလောက်အထိ သက်သောင့်သက်သာ ရှိရှိ နေနိုင်တာမို့ အဲကွန်းကို ၂၅ ဒီဂရီမှာ ဆက်တင်လုပ်ထားခြင်းဟာ ကိုယ့်အိမ်ခန်းထဲ ရေခဲတိုက် ဖန်တီးထားခြင်းထက် မီတာခကို များစွာ သက်သာစေသလို…
ပြင်ပအပူချိန်နဲ့ များစွာ ကွာတဲ့ အခန်းတွင်း အပူချိန်မှာ အသားကျသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ ရေခဲတိုက်သမားများထက် ပြင်ပ အပူချိန်ကို ပိုပြီး ခံနိုင်ရည် ရှိတဲ့အပြင်
အတွွင်း အပြင် အပူ အအေး ကွာခြားလွန်းလို့ အခန်းပြင်ထွက်တာနဲ့ လေပူမိပြီး ရှော့ခ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကနေလည်း အတိိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ကင်းဝေးစေနိုင်ပါတယ်။
လေတိုက်နှုန်းဟာလည်း Feels-like Temperature ကို သက်ရောက်တာကြောင့် ပန်ကာလည်ပတ်နှုန်း များရင် ပိုအေးတယ် ထင်ပြီး တစ်ဆုံးတင်ထားကြတာ များကြပါတယ်။
ပန်ကာလည်နှုန်း မြင့်လေ မီတာစားနှုန်း မြင့်လေမို့ စဖွင့်ဖွင့်ချင်း Fan Speed ကို တင်ချင် တင်ပြီး အေးလာတာနဲ့ အနိမ့်ဆုံးမှာ ပြန်ချထားခြင်းဟာလည်း ကျန်းမာရေးအတွက်ရော မီတာခ သက်သာရေးအတွက်ရော အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆီက ဘတ်စ်ကားတွေ၊ လေယာဉ်ပျံတွေ၊ ရုံးတွေ ကျောင်းတွေမှာ နွေရာသီမှာတောင် အဲကွန်းကို အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီလောက်မှာပဲ ချိန်ထား လုပ်ထားပါတယ်။
ရုံးခန်းတွေ အိမ်တွေမှာလည်း အဲကွန်းကို ၁၆ ဒီဂရီအထိိ အနိမ့်ဆုံးထားပြီး တောင်ကြီး ကလော ရာသီဥတုမျိုးကို ဖန်တီးထားကြပါတယ်။
အမေရိကားရောက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လှမ်းပြောပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာက ပူလို့ အေးလို့ ဆိုပြီး တော်တန်ရုံ အဲကွန်းကို မသုံးကြဘဲ မီတာခကို ချွေတာကြတယ်တဲ့။
ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေကို အရာရာ နတ်ဘုံနတ်နန်းလို့ ထင်နေပေမဲ့ တကယ်က မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာလည်း သူတို့ရတဲ့ လခနဲ့ လူနေမှု စရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်း ဒဏ်ကို ခံနိုင်အောင် စစ်စစ်စီစီီ ချွေချွေတာတာ သုံးကြရတာပါ။
အမှန်က လူ့အရေပြားဟာ ၂၀ နဲ့ ၂၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ််ကြားက အပူချိန်မှာ နေလို့ ထိုင်လို့ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီတော့ အဲကွန်းကို ဖွင့်တဲ့အခါမှာ ၂၅ ဒီဂရီမှာအပူချိန်ကို ထိိန်းညှိထားလိုက်ခြင်းဟာမီတာခ အရမ်းသက်သာသွားသလို ကျန်းမာရေးကိုလည်း မထိခိုက်စေတော့ပါဘူး။
အဲကွန်းကို တောက်လျှောက်သုံးပြီး မီတာခကိို ဒီထက် လျှော့ချချင်သေးတယ် ဆိုရင်လည်း ရပါသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ အဲကွန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ခုထဲမှာ…Compressor နဲ့ Condenser တွေဟာ လေရဲ့ ပကတိ အပူချိန်ကို ဖယ်ရှားပြီး အေးမြအောင် လုပ်ပေးသလို
Evaporator က လေထုထဲက ရေငွေ့ကို ဖယ်ရှားပြီး အခန်းထဲကဘအပူတွေကို ဖယ်ပေးတာပါ.
Cool Mode မှာ Evaporator Compressor နဲ့Condenser တွေ အားလုံး အလုပ်လုပ်ပြီး အခန်းတွင်းက လေကို အေးမြစေပါတယ်။
Dry Mode မှာတော့ လေထုထဲက ရေငွေ့ကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ Evaporator သာ အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ပိုနည်းပါတယ်။
ဒီတော့ အခုလို အပူချိန် သိပ်မမြင့်လှသော်လည်း ပူအိိုက်စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းတဲ့ မိုးရာသီမှာ အဲကွန်းကို Cool Mode နဲ့ မသုံးဘဲ Dry Mode ကို ၂၅ ဒီဂရီလောက်မှာ ထားပြီး Fan Speed ကိုလည်း လျှော့ပြီး သုံးမယ် ဆိုရင်…
အခန်းတွင်း ရေငွေ့ပါဝင်နှုန်းကို လျှော့ချပေးတဲ့အတွက်် အခန်းတွင်းမှာ မှိုိမတက်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးမွှားတွေ မပေါက်ပွါးနိုင်ခြင်း
ရေငွေ့နည်းပြီး ခြောက်သွေ့သွားတဲ့လေဟာ လူ့အရေပြားက ချွေးတွေကိို အလွယ်တကူ အငွေ့ပြန်စေလို့ အေးမြမှုကို Cool Mode နဲ့ အအေးခံထားသည့်အလား ခံစားရစေခြင်း
၂၅ ဒီဂရီလည်း ဖြစ်ပြန် Dry Mode လည်း ဖြစ်ပြန်လိို့ မီတာခ သက်သာခြင်း စတဲ့ အကျိုးတွေကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း လက်တွေ့ နှိုင်းယှဉ် စမ်းသပ်နိုင်စေဖို့ စိုးလျှပ်စစ်မှ မျှဝေလိိုက်ရပါတယ်.
အဲယားကွွန်းကို 16 မှာထားတာရင်လဲ ဒီီလေပဲ 30 မှာထားလဲ ဒီလေပဲထွက်ပါတယ်နော်. အလုပ်လုပ်ချိန်ပိိုကြာသွားလို့ ပိုအေးတာပါ.
အခြားသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကိိုလည်း အထာသိပြီးသတိထား အသုံးပြုရင် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကညန႐ုံးမ်ား ျပန္္ဖြင္႔မည္႔ရက္ကို ေၾကျငာျပီ
ျပဳတ္ၿပီးေရခ်ိဳးေပးရုံျဖင့္ ေလးဘက္နာ ေပ်ာက္တဲ႔ေဆးပင္္